ओमिक्रोन भेरियन्टः निको भएका संक्रमितमा पोष्ट कोभिडको समस्या कति? :: रिता लम्साल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
ओमिक्रोन भेरियन्टः निको भएका संक्रमितमा पोष्ट कोभिडको समस्या कति?
रिता लम्साल बिहीबार, माघ २०, २०७८, ०६:२०:००
काठमाडौं– कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा कोरोना संक्रमण भएपछि पोष्ट कोभिडको समस्या धेरैमा देखियो।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, वीर अस्पताल लगायतका अघिकांश अस्पतालहरुले पोष्ट कोभिडका लागि छुट्टै वार्ड नै सुरु गरेका थिए।
विशेषगरी कोरोना संक्रमण भएर अस्पतालमा भर्ना भएका, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा पुगेका बिरामीहरु पछि फेरि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना नै गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
अहिले नेपालमा ओमिक्रोन र डेल्टा दुवै भेरियन्टका संक्रमति देखिइरहेको छ। डेल्टाको तुलनामा ओमिक्रोन कम खतरा रहेका कारण धेरै स‌ंक्रमित अस्पताल भर्ना हुनु परिररहेको अवस्था छैन। पछिल्ला दिनमा नेपालमा डेल्टाभन्दा ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुने धेरै छन्।
ओमिक्रोनले धेरैमा सामान्य लक्षण देखाएको र स्वासप्रस्वासको माथिल्लो भागमा बढी असर गरेको छ। ओमिक्रोन सहितको तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण देखिएपछि मृत्यु हुनेहरुमा धेरै जस्तो ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरु छन्।
ओमिक्रोन संक्रमितमा पनि विगतमा जस्तै पोष्ट कोभिड संक्रमण देखिन थालेको छ त?
संक्रमितमा दोस्रो लहरमा जस्तो गम्भीर अवस्था नदेखिएकाले यो लहरमा पोष्ट कोभिडको समस्या पनि कम हुन्छ भन्ने चिकित्सकहरुको अनुमान छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डा निरज बमका अनुसार अस्पतालमा अहिले पनि पोष्ट कोभिडका बिरामी उपचाररत छन्। तर तीमध्ये अधिकांश डेल्टा भेरियन्टबाट संक्रमित भएकाहरु छन्।
उनले अहिले अस्पतालमा पोष्ट कोभिडका संक्रमितको संख्या निकै कम भएको जानकारी दिए।
‘बैशाखदेखि असोज/कात्तिकमा पोष्ट कोभिडका बिरामीहरु बढी हुन्थ्ये,’ डा बमले भने, ‘यो सबै दोस्रो लहरमा संक्रमण भएका व्यक्तिहरु नै थिए, अहिले पोष्ट कोभिडका बिरामीको संख्या कम भएको छ। ओमिक्रोन संक्रमितमा पोष्ट कोभिडको कस्तो समस्या देखिन्छ भन्ने कुरा अझै केही समयपछि मात्र थाहा हुन्छ।’
उपचारका लागि आउने पोष्ट कोभिडका बिरामीहरुमा कोभिड संक्रमण हुँदाजस्तै ज्वरो आउने, रुघाखोकी लाग्ने, छाती घ्यारघ्यार हुने, कोरोना संक्रमण हुँदा एक्सरेमा देखिएको छातीको दाग कम नहुने लक्षणहरु बढी भएको डा बमको भनाई छ। अस्पतालमा बुधबार मात्र करिब ५ जना बिरामीहरु वार्डमा भर्ना भएर नै उपचार सेवा लिइरहेका छन्।
डा बमका अनुसार यस्ता समस्या लिएर आउने बिरामीहरुमा धेरैजस्तो कोभिड संक्रमणको समयमा हाइफ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने, आइसीयू तथा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाबाट निको भएका बिरामी र दीर्घ रोग भएकाहरु छन्।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि पोष्ट कोभिडका बिरामी कम भएका छन्।
दोस्रो लहरमा संक्रमण भएकाहरु निको हुँदै गएको र ओमिक्रोनको संक्रमण भएकाहरुमा पोष्ट कोभिडको समस्या आइनसकेको डा शेरबहादुर पुनले सुनाए।
‘हाम्रो अस्पतालमा आजभोलि पोष्ट कोभिडका बिरामी खासै छैनन्, दोस्रो लहर पछि धेरे नै आएका थिए,’ डा पुनले भने, ‘ओमिक्रोन देखिएपछि आउने पोष्ट कोभिडका बिरामीहरु पनि छैनन्।’
ओमिक्रोन निको भएपछि मानिसमा फेरि स्वास्थ्य समस्याहरु देखिन्छ वा देखिँदैन अहिले भन्न नसकिने डा पुनले बताए।
उनी भन्छन्, ‘अहिले नै भनिहाल्ने अवस्था छैन, यो ओमिक्रोनले शरीरमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा निको भएको एकडेढ महिनामा देखिने गर्छ, त्यसैले अहिले नै कस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन।’
ओमिक्रोन संक्रमण भएकाहरुमा पोष्ट कोभिडको समस्या डेल्टाको तुलनामा कम हुनसक्ने डा पुनको अनुमान छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा जस्तै वीर अस्पतालमा पनि उपचारका लागि आउने पोष्ट कोभिडका बिरामी घटेका छन्।
अस्पतालका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डा भूपेन्द्र बस्नेतका अनुसार पहिलो र दोस्रो लहरपछि अस्पतालले पोष्ट कोभिड ओपिडी, पोष्ट कोभिड आईसीयू नै सञ्चालन गरेको थियो।
तर अहिले पोष्ट कोभिडका बिरामीको संख्या न्युन रहेको उनले बताए।
डा बस्नेत भन्छन्, ‘अहिले पोष्ट कोभिड नै भनेर आउनेहरु कम छन्, अहिले धेरै बिरामी कोभिड नै भएर आइरहेका छन्। यो कोभिडका बिरामी कम हुँदै गएपछि पोष्ट कोभिडका बिरामी आउनसक्छन्।’
के हो पोष्ट कोभिड समस्या? कस्ता समस्या देखिए अस्पताल जानुपर्ने हुनसक्छ?
कोभिड-१९ संक्रमणमुक्त भइसकेपछि पनि शरीरमा विभिन्न समस्या तथा असर देखिन्छ भने त्यसलाई पोष्ट कोभिड समस्या भनिन्छ। संक्रमणमुक्त भएपछि अलिअलि जिउ गल्ने वा थकान भए जस्तो महसुस हुनसक्छ, त्यसमा आत्तिएर अस्पताल गइहाल्नु पर्दैन।
तर सास फेर्न धेरै गाह्रो हुने, निद्रा नलाग्ने झर्को लाग्ने जस्ता डिप्रेसनका लक्षणहरु देखापर्ने, थोरै समय हिँड्दा पनि स्वाँ-स्वाँ हुने, धेरै नै थकाई लाग्ने र धेरै कमजोरी महसुस हुने, एकाएक रक्तचाप बढ्ने वा घट्ने, कालो ढुसीका लक्षणहरु देखिने जस्ता पोष्ट कोभिड समस्याहरु देखा परेमा चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर अस्पताल जानुपर्ने हुनसक्छ।